High Court Inoti Hurumende Iwanise Mvura Yakachena, Yakakwana kuGuta reChitungwiza
Mvura iri kunetsa kuwana mumaguta mazhinji muZimbabwe
Dare repamusoro muZimbabwe, reHigh Court, rakatonga kuti kanzuru yeguta reChitungwiza, pamwe chete nehurumende, vanosungirwa kuwanisa vagari veChitungwiza mvura yakakwana uye yakachena.
Sangano rinomirira vagari veguta iri, reChitungwiza Residents Trust, kana kuti CHITREST, rakaenda kumatare edzimhosva rikamhangara kuti kanzuru yeChitungwiza, gurukota rinoona nezvemari, VaMthuli Ncube, gurukota rinoona nezvehutano, VaObediah Moyo, pamwe chete negurukota rezvematunhu, VaJuly Moyo, vaone kuti guta reChitungwiza rinowana mvura yakachena uye yakakwana.
Mukuru wesangano iri, Muzvare Alice Kuvheya, audza Studio 7 kuti guta reChitungwiza ratambudzika pamusoro pekushomeka kwemvura kwenguva yakawanda asi pasina chirikuitwa.
Vati zvekare mazuva ano zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuda kwechirwere cheCOVID-19, icho chisingade kuungana kwevanhu panzvimbo imwe chete uye chinoda kuti vanhu vageze maoko avo nguva dzese dzese. Vati muguta ravo hamuna mvura yekuita izvi uye vanhu vanoungana vachirwirana mvura isingakwani pazvibhorani izvo vanoti zvinokonzera kupararira kwechirwere ichi.
Patabata gweta rakamirira CHITREST munyaya iyi, VaTinashe Chinopfukutwa, veZimbabwe Lawyers for Human Rights, vati pavange vari hapakwanisi kuti vataure nesu. Asi tabata mukuru weCHITREST, Muzvare Alice Kuvheya, avo vati vanechivimbo chekuti hurumende ichateerera zvatongwa nedare repamusoro, reHigh Court.
Hurukuro naMuzvare Alice Kuvheya